Mari yemahara kubva kuApple yezvose | Ndinobva mac
Gore rino vachange vawedzera zero mari yekutsigira mune yakasarudzika nzira yavo iPhone, iPad uye Mac mamodheru.Iyi zero mari yekubhadhara mari yanga isingawanikwe kune zvese zvigadzirwa zvavanazvo pawebhu asi izvozvi kusimudzira kwadzoka.
Vese vashandisi avo vanoda kutsigira kutenga kwavo kuApple vanogona kuzviita izvozvi nemutengo we zero, ndiko kuti, ivo havazofaniri kubhadhara chero mubereko wekutsigira yavo Mac, iPhone, iPad, AirPods, HomePod, kesi etc. Hongu zvirokwazvo, ine huwandu hwehuwandu hwehuwandu hwe299 euros.
Imwe tsananguro yekufunga mune iyi kesi ndeyekuti mari yemari pasina mutengo ine yakatemwa izwi sekuratidzwa neApple pane yayo webhusaiti. Mune ino kesi isu tinotarisira kuti zvichaitika zvakafanana nezvakaitika pazviitiko zvekare uye kuti izwi richaramba richikura sekuguma kunosvika, panguva ino tiri kutaura nezve kupihwa kwe mari pa0% APR inowanikwa pakati paJune 17 naJuly 29, 2021.
Sangano rinotarisira kutisiira mari mune ino ndeye Cetelem, avo vashandisi vanga vatove nemari yavakagadzira kare havazofaniri kunyoresa kana kuita chero danho chero rekutenga chigadzirwa uye kuwedzera Cetelem senzira yekubhadhara. Kune vamwe vese vashandisi, maitiro acho anogona kunge anononoka nekuti kana iwe usina account pafoni iyoyo, waita imwe nzira yemari yapfuura, uchafanirwa kupfuudza mamwe mafirita anomaka kuti uwane mari iyi. Zvese izvi zvinogona kuitwa kubva kumba kubva kune yepamutemo Apple zvitoro zvakananga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Yemahara Apple Mari Yezvose